ကလိုစေးထူး: စည်းမဟုတ်သော စည်းကို...
ဘယ်သူပြောလဲ နိုင်ငံရေးငှက်များ မိုးခိုရန် နေရာမဟုတ်ပါလို့
ကိုကြီးစေးလဲ တတပ်တအားအနေနဲ့ အမြဲရှိနေပါတယ်။ အခုချိန်မှာ အားပျော့ဖို့မဟုတ်ဘူး အားတိုးဖို့ အားတွေလိုတယ်။ စိတ်မညစ်နဲ့။
Sep 21, 2007, 1:03:00 AM
စည်းမခြား ထားပါဘူး ကိုစေးထူး ... နိုင်ငံကို မိုက်မိုက် ရိုင်းရိုင်း သုံးစွဲထား တာတွေ ရှိလို့ ခဏ ပရိုက်ဗိတ်လုပ် ခဏနားပြီး မှတ်ချက်နဲ့ ပြန်ဖွင့် ထားရတာပါ ... တူညီတာ တစ်ခုက နိုင်ငံကို ချစ်တယ် တိုးတက် စေချင်တယ် ... ကြိုးစားပြီး လုပ်လည်း လုပ်နေတယ် ... ဒါပေမယ့် မမိုက်ရိုင်း စေချင်ဘူးလေ ... နိုင်ငံကြီးသား ပီသစေချင်တာ ... :D ကျွန်တော် ဘယ်သူ့မှ မစော်ကားခဲ့ပါဘူး ... :) အခြေအနေတွေကို နားလည် ကိုယ်ချင်းစာ စေချင်တယ် ... :D ... ဒီလောက်ပါဘဲ ... :P
Sep 21, 2007, 2:03:00 AM
အကိုပြောတာမှန်ပါတယ်။ သဲတို့စိတ်တွေက လုံးဝစည်းမခြားထားပါဘူး။ စိတ်မညစ်ပါနဲ့။ အားတင်းထားပါနော်...
Sep 21, 2007, 3:17:00 AM
What you wrote is correct!! Hit the point!I am at outside Myanmar,but notarefugee, justanormal worker, I try to read all Myanmar blogs,inside/outside the country. For them, inside people, they have "Fear",yes ofcourse,if I were them, I also would feel the same. But do not worry, we, except brainless people, all know the Truth.
Sep 21, 2007, 3:45:00 AM
အကိုပြောသလိုပါပဲ ဆုဝေတို့ရဲ့ စိတ်တွေကို ဘယ်လိုမှ စည်းခြားထားလို့ မရပါဘူးနော်။ ဆုဝေဆိုရင် ဘလော့ဂ်တွေကို တစ်ရက်မှ လိုက်မဖတ်ဘဲ မနေနိုင်ဘူး။
Sep 21, 2007, 4:13:00 AM
ပြည်တွင်း ပြည်ပ ဘလောက်ဂါဆိုတာ အနော်တို့ ရင်ထဲမှာ အရင်ကလည်းမရှိပါဘူး၊ အခုလည်း မရှိပါဘူး၊ နောင်လည်း ဘယ်တော့မှ ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘလောက်တွေကိုမြန်မာလိုရေးပြီး မြန်မာတွေဖတ်ဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ “မြန်မာဘလောက်ဂါ”တွေဆိုတာပဲ ရှိမှာပါ... အရောင်မဆိုး အဖြူသက်သက်နဲ့ အားလုံးကိုလေးစားလျှက်ပါ..
Sep 21, 2007, 4:51:00 AM
အားလုံးကတိုင်းပြည်ကိုသူ့ နည်းနဲ့ သူချစ်နေကြမှာပါ။
Sep 21, 2007, 4:58:00 AM
Sep 21, 2007, 2:09:00 PM
အစကတည်းကပြောပါတယ် စိတ်တွေထဲမှာ ဘာစည်းမှခြားလို့ ရပါဘူးဆို ညီမကတော့ လာဖတ်ဦးမှာ သိပီလား ငှက်ငှက်ငှက်
Sep 22, 2007, 3:44:00 AM